Translate Thai to Myanmar (Burmese) | Multilang.space
translate Thai to Myanmar (Burmese), Thai to Myanmar (Burmese) translations, Thai to Myanmar (Burmese) Google Translate ,
สวัสดีคุณเป็นอย่างไร မင်္ဂလာပါ, နေကောင်းလား
ฉันรักคุณมาก ๆ ငါသည်သင်တို့ကိုတကယ်အရမ်းချစ်ကြ
สวัสดีฉันชื่อ မင်္ဂလာပါ, ငါ၏နာမဖြစ်ပါသည်
ฉันขอโทษ แต่ฉันแต่งงานแล้ว ငါစိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါလက်ထပ်ဖြစ်ကြောင်းကို
เวลาตอนนี้คืออะไร? ညာဘက်ယခုအချိန်ကိုအဘယျသို့ ကျေးဇူးပြု. ပါသလဲ
ฉันสามารถยืมที่ชาร์จโทรศัพท์ของคุณได้ไหม ငါသည်သင်တို့၏ဖုန်းကို charger ကိုကျေးဇူးပြုပြီးချေးနိုင်သလား?
สั่งให้ฉันดื่มโปรด? ငါ့ကိုသောက်စရာအမိန့်, ကျေးဇူးပြု. ?
ฉันแพ้กลูเตน ငါ gluten မှမတည့်ဘူး
โทรหาฉันเจ้านายของคุณโปรด ငါ့ကိုသင့်ရဲ့သူဌေးကို ကျေးဇူးပြု. ခေါ်ဆိုပါ။